Trump : Xeer Illaaliyaha Guud waa nin daciif ah - BBC News Somali
Trump : Xeer Illaaliyaha Guud waa nin daciif ah
25 Luulyo 2017
Trump ayaa la sheegay inuu dhawaan go'aan ka gaari doono Jeff Sessions
Madaxweynaha Maraykanka ayaa markale weeraray xeer illaaliyaha guud ee dalkaasi Jeff Sessions xili ay madaxweynaha ku furanyihiin baaritaanno la xiriira in uu Ruushka garab ka heley xiligii doorashadii dhacday sanadkii hore.
Warar qaarkood oo ay qorayaan saxaafada Maraykanka ayaa sheegaya in Trump uu ka fikirayo in uu xilka ka qaado Sessions oo maalmahanba hadal-heyntiisa ay socotay.
Trump ayaa boggiisa Twitterka waxa uu ku qoray "Xeer Illaaliyaha Guud Jeff Sessions waxa go'aan daciifnimo ah ka qaatay baaritaanka la xiriira dambiyada ay gashay Hillary Clinton , iyo dadka faafinaya siraha dalka".
Mar sii horeysey Trump waxa uu Sessions ku tilmaamay nin go'doonsan, isaga oo ka shalaayay in uu markii horeba xilka u magacaabay.
Waxa uu Trump ninkani ku heystaa sababta uu isaga saaray guddiga baaritaanka FBI ee la xiriirey lugtii Ruushka ku lahaa doorashadii dhacday sanadkii hore.
Isfaham darada madaxweynaha iyo xeer illaaliyaha ayaa gaartay halkii ugu sareysey iyada oo Jeff Sessions uu Aqalka Cad tagay Isniintii si uu ula kulmo Trump, balse kulankaasi ma uusan dhicin sida ay sheegtey Sarah Huckabee Sanders oo ah afayeenada Aqalka Cad.
Trump oo taageeray xeer ilaaliyihiisa Sessions
Wararka qaarkood oo soo baxay ayaa tibaaxaya in madaxweynaha uu booska ninkani ku badali doono duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani.
Balse sida uu sharciga qabo haddii Sessions xilka laga qaado waxaa isla markiiba booska buuxinaya ku xigeenkiisa Rod Rosenstein, hase yeeshee Trump ma jecla ninkani laftiisa, horey ayuuna eedeymo ugu jeediyey.
Dadka siyaasadda u dhuun-daloola waxa ay sheegayaan in bartilmaameedka ugu weyn ee Trump uu yahay Ergeyga gaarka ah ee baaritaanka fadeexadda Ruushka, Robert Mueller, kaasi oo uu ul booc ah ugu tukubayo sidii uu meesha oga saari lahaa.
Ma jirto cid ka badbaaday Trump, todobaadkii hore waxa uu u duur-xuley Agaasimaha cusub ee FBI-da Andrew McCabe, kaasi oo uu ku ka sheegey wax u muuqdey eedeyn musuq-maasuq, isaga oo sheegey in Hillary Clinton ay xaaska McCabe siisay lacag gaaraysa $700,000 .
Sidoo kale todobaadkii hore waxaa xilkii isaga dagay afhayeenkii Aqalka Cad Sean Spicer oo ahaa foolka muuqda ee Trump.
Ogeysiiskii ahaa "ku soo dhowoow 1991. Sannad xun!"
TOOS Ninkii lacagta madaxfurashada u geeyay ayay isagii afduubteen
Taalibaan: 'Haddii nabad la rabo madaxweynaha Afghanistan ha iscasilo'
Wariye ka tirsan BBC: Maalintii uu Injineer Yariisoow iga badbaadiyay nin Bambo watay
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 3 Agoosto 2019
Muxuu yahay cudurka laga cabsi qabo ee kusii faafaya gobollada Maraykanka?
Ninkii ku jeesjeesay tallaalka Covid-19 oo isla xanuunkii u dhintay